Nnwom 90:11-17 NA-TWI | Biblica
Nnwom 90:11-17 NA-TWI
Hena na waka w’abufuw mu tumi nyinaa ahwɛ da? Hena na onim ehu ko a ɛwɔ w’abufuw mu?
Ma yenhu yɛn nna kan sɛnea ɛte, na yɛanya nyansa koma. W’abufuw bɛkyɛ akosi bere bɛn? O Awurade, hu w’asomfo mmɔbɔ! Anɔpa biara, fa wo dɔ a ɛwɔ hɔ daa no hyɛ yɛn mu sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛto dwom na yɛn ani agye wɔ yɛn nkwanna nyinaa mu. Mprempren, ma yɛn ahotɔ te sɛ nea mfe a yɛwɔ ahoyeraw mu no woma yedii awerɛhow no pɛ. Ma yɛn a yɛyɛ w’asomfo nhu wo nneyɛe a tumi wɔ mu no, na ma yɛn asefo nhu w’anuonyam mu tumi no. Awurade yɛn Nyankopɔn, wo nhyira mmra yɛn so. Nea yɛyɛ biara, ma ɛnyɛ ye.
Read More of Nnwom 90